အတားအဆီးများကို ဖော်ထုတ်ခြင်း - ကိုယ်သာတရားခံ | mmshare
၁ − ငါမှမသိတာ
ကျွန်တော်တို့ အများဆုံး သုံးတဲ့ စကားပါ။ အဲဒီအတွက် အကောင်းဆုံး အဖြေကတော့ − Google ကို သုံးပါ။ တနည်းအားဖြင့် အင်တာနက်ထဲက အခမဲ့ရနိုင်တဲ့ အချက်အလက်အတွေ အများကြီးထဲက ကိုယ်လိုချင်တာတွေ ရှာတွေဖို့၊ မသိတာတွေကို သိလာဖို့ Google ကို သုံးပါ။ ဒီခေတ် ဒီအချိန်လောက် သတင်းအချက်အလက်တွေကို အခမဲ့ အလွယ်တကူ ရနိုင်တာမျိုး ဘယ်အချိန်ကမှ မရှိခဲ့ဖူးပါဘူး။
တစ်ခုခုကို မသိဘူးဆိုရင် "ငါမသိဘူး" လို့ မပြောခင် "Google မှာ ရှာကြည့်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့"။ ကိုယ်ဘာကို မသိတာလဲ ဆိုတာ အရင် သိအောင်လုပ်ပါ။ ပြီးရင် အချိန်ပေးပြီး ရှာပါ။ လေ့လာသင်ယူရတာ မကြောက်ပါနဲ့။ ဘဝ ခရီးလမ်းတစ်လျှောက် ရင်ဆိုင်လာရမယ့် စိန်ခေါ်မှု အသစ် အမျိုးမျိုးအတွက် လေ့လာသင်ယူဖို့ကို မကြောက်ပါနဲ့။
၂ − လိုအပ်တဲ့ ပညာရပ်တွေ မရဘူး
တခါတလေ ကိုယ်လိုချင်တာတွေကို လေ့လာဖို့ အင်တာနက်မရတာ၊ အင်တာနက် နှေးနေတာတွေ ရှိပါလိမ့်မယ်။ တကယ်တော့ အင်တာနက်ကို ကိုယ့်လို မသုံးနိုင်တဲ့သူတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ အဲဒီလို အချိန်မှာ စာအုပ်တွေ၊ စာကြည့်တိုက်တွေ၊ စာအုပ်ဆိုင်တွေကနေ ရသလောက် လေ့လာဖို့ ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။
တခါတလေမှာ အပြင်မှာ ဖွင့်တဲ့ သင်တန်းတွေကို တက်သင့်ရင် တက်ရပါလိမ့်မယ်။ သိတဲ့ တတ်တဲ့သူတွေဆီက ပြန်သင်ဖို့ လုပ်ရပါမယ်။ ကိုယ်လုပ်ချင်တာ တစ်ခုကို အောင်မြင်အောင် လုပ်နိုင်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ ပညာ အရည်အချင်းတွေကို ဖြည့်ဆည်းဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
၃ − ပိုက်ဆံမှ မရှိတာကိုး
ငွေရေးကြေးရေး ကိစ္စက အတော်မလွယ်တဲ့ အရာပါ။ အခုအချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ လက်ထဲ ပိုက်ဆံ ရှိချင်မှ ရှိပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဝင်ငွေကို တိုးလာအောင် ရိုးရိုးသားသား၊ သမာအာဇီဝကျကျနဲ့ ရှာလို့ရတဲ့ နည်းလမ်းတွေ အများကြီး ရှိတယ်ဆိုတာကို သိထားဖို့ လိုပါတယ်။
သင်ဟာ လခစားဝန်ထမ်း တစ်ယောက်ဆိုရင် အလုပ်ချိန် ပြင်ပမှာ ကိုယ်ပိုင် ပရောဂျက်တွေ၊ Freelance project တွေကို ရှာလုပ်ပြီး အပိုဝင်ငွေ ရှာနိုင်ပါတယ်။ Freelance ပရောဂျက် တွေကို ကိုယ်ပိုင်အချိန်တွေမှာ လုပ်တဲ့အတွက် အချိန်ကို အကျိုးရှိအောင် အသုံးချရာ ရောက်တဲ့အပြင်၊ ပညာလည်းတိုး အပိုဝင်ငွေလည်းရတဲ့အတွက် တစ်ချက်ခုတ် အများကြီး ပြတ်တဲ့ နည်းလမ်း ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်မှာ လုပ်ချင်စိတ်ရှိဖို့ လုပ်နိုင်ဖို့တော့ လိုပါတယ်။
ရလာတဲ့ ငွေကြေးတွေကို ကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့ အလုပ်တွေ လုပ်ဖို့ စုဆောင်းထားပါ။ ခြိုးခြံ ချွေတာပါ။ မလိုအပ်ဘဲ အပို မသုံးပါနဲ့။ ပိုက်ဆံ ရှာရခက်တယ်ဆိုတာ တကယ်တော့ ရာနှုံးပြည့် မမှန်ပါဘူး။ လူတွေ နေ့တိုင်း နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ သုံးနေတာ နေရာတိုင်းမှာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
ကိုယ့်ကို တစ်ခုခု ခိုင်းမယ့်သူ၊ အလုပ်အပ်မယ့်သူကို ရှာဖို့တော့ လိုပါမယ်။
၄ − မစွန့်စားရဲလို့
ဘဝမှာ စွန့်စားဖို့ အကောင်းဆုံး အချိန်ဟာ တစ်ခုခုကို အမှန်တကယ် ပြင်းပြင်းထန်ထန် လုပ်ချင်ကိုင်ချင်စိတ် ပေါ်နေတဲ့ အချိန်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ အချိန်မှာ မစွန့်စားဖြစ်ရင် နောင်မှာ စွန့်စားဖို့ ပိုခက်သွားပါလိမ့်မယ်။
မစွန့်စားရဲဘူး ဆိုတာဟာ တကယ်တော့ မဖြစ်သေးတာ၊ ကိုယ်မသိသေးတဲ့ အရာတစ်ခုကို ကြိုပြီး ကြောက်နေတာပါ။
တကယ်လို လူအများစု အတွက် တစ်ကယ် အလုပ်ဖြစ်မယ့် စိတ်ကူးကောင်းကောင်း တစ်ခု ရှိရင် အချိန်ဆွဲမနေသင့်ပါဘူး။ မတွေမဝေ မကြောက်မရွံ့ ချက်ချင်း ထပြီး အကောင်အထည် ဖော်လိုက်ဖို့ သိပ်အရေးကြီးပါတယ်။
၅ − သိပ်ခက်တာပဲ
အရေးကြီးတဲ့ အဖိုးထိုက်တန်တဲ့ အရာ အတော်များများကို ဘယ်သူမှ အလွယ်တကူ ရလေ့ မရှိပါဘူး။
လူတိုင်း အလွယ်လုပ်လို့ရတဲ့ အရာတစ်ခုအတွက် ဘယ်သူကမှလည်း ပိုက်ဆံများများမပေးပါဘူး။
၆ − ကလေးဘဝက လေ့လာသင်ယူနည်း
ကလေးတွေရဲ့ လေ့လာသင်ယူနည်းက အားလုံး အတူတူပါပဲ။ Trial & Error နည်းလမ်းပါ။ စမ်းကြည့်တယ်၊ မှားတယ်၊ ပြန်လုပ်ကြည့်တယ်။
ကလေးတွေဟာ သူတို့လုပ်ချင်တာတစ်ခုကို မရမချင်း Trial & Error နည်းလမ်းနဲ့ မဖြစ်မနေ ကြိုးစားတတ်ကြသူတွေပါ။ လမ်းလျှောက်သင်နေတဲ့ ကလေးငယ် တစ်ယောက်ရဲ့ ဘဝမှာ အခြေမခိုင်၊ ယိုင်လဲတဲ့ အကြိမ်ပေါင်း မရေမတွက်နိုင်အောင် ရှိခဲ့ပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ရဲ့ အားမလျော့တမ်း ကြိုးစားမှုကြောင့် နောက်ဆုံးမှာ လမ်းလျှောက်တတ်သွား တာပါပဲ။
ကလေးတွေမှာ ကျွန်တော်တို့လို အင်တာနက်၊ အီးဘွတ်၊ ဆရာသမား၊ မိတ်ဆွေတွေ မရှိပါဘူး။ သူတို့တွေဟာ သူများတွေ ဘာလုပ်သလဲ လိုက်ကြည့်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကိုယ်တိုင် လိုက်လုပ်ကြည့်တယ်။ မှားတယ်၊ လဲကျတယ်။ ပြန်ထတယ်၊ ပြန်လုပ်ကြည့်တယ်။
ကလေးဘဝကို ဖြတ်သန်းလာခဲ့တဲ့ ကျွန်တော်တို့မှာ လေ့လာသင်ယူနိုင်စွမ်းတွေ၊ လဲနေရာက ပြန်ထနိုင်စွမ်းတွေ အပြည့် ရှိပြီးသားပါ။ လဲကျမှာ မကြောက်ဖို့ လိုချင်တာကို ရအောင် အစွမ်းကုန် ကြိုးစားကြည့်ဖို့ပဲ အရေးတကြီး လိုအပ်ပါတယ်။
၇ − သူများလုပ်ထားပြီးသား
သူများလုပ်နေလို့ ကိုယ်မလုပ်ရတော့ဘူးလား။ မဆိုင်ပါဘူး။
သင်လုပ်တာက ရှေ့ကလူတွေထက် ပိုကောင်းနိုင်ပါတယ်။ ရှေ့လူတွေရဲ့ အားနည်းချက်တွေကို လေ့လာသင်ယူ သုံးသပ်ပြီး ကိုယ်က ပိုကောင်းအောင် လုပ်နိုင်ပါသေးတယ်။ အကြံတူရင် နောက်လူက သာစမြဲဖြစ်လို့ သူများလုပ်ထားတာတစ်ခုကို လိုက်လုပ်ရပြီ ဆိုတဲ့အခါ ကိုယ်က ပိုကောင်းအောင် လုပ်နိုင်တဲ့ အခွင့်အရေး ရှိတယ်ဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့။
၈ − ဘယ်ကစလုပ်ရမယ်ဆိုတာ မသိ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် ဦးနှောက်ကို လျော့မတွက်ပါနဲ့။ သူ့ရဲ့ ပင်ကို သဘာဝကိုက အစီအစဉ် မကျဘဲ အလုပ်လုပ်တတ်အောင် ဖန်တီးထားတာပါ။
ကိုယ်မသိသေးတာ တစ်ခုကို စပြီး လေ့လာသင်ယူဖို့ စိတ်ဖြစ်လာပြီ ဆိုရင် ရောက်နေတဲ့ နေရာက စပြီး လေ့လာလိုက်ပါ။ လေ့လာရင်းနဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ အစ/အလယ်/အဆုံး ပြည့်စုံ နှံ့စပ် လိပ်ပတ်လည်သွားပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ်အဆင်ပြေတဲ့ ပုံစံ၊ အဆင်ပြေတဲ့ နည်းလမ်းနဲ့ လေ့လာသင်ယူပါ။ ဒါဟာ သင့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် အတွေ့အကြုံပါပဲ။ သူများတွေနဲ့ မတူတဲ့ အဲဒီ ကိုယ်ပိုင် အတွေ့အကြုံတွေက တဆင့် သူများတွေနဲ့ မတူတဲ့ ဆန်းသစ်တဲ့ အတွေးအမြင်တွေ ရလာပါလိမ့်မယ်။
‹ ဘဝခရီးမှ အတားအဆီးများကို ဖော်ထုတ် ရင်ဆိုင်ခြင်း up အတားအဆီးများကို ဖော်ထုတ်ခြင်း (၂) - သူတို့ကြောင့်လား ›
Sun, 10/14/2012 - 08:45
အတားအဆီးများကို ဖော်ထုတ်ခြင်း ဆောင်းပါးတွေ အရမ်းကောင်းပါတယ်ဗျာ .
အတားအဆီးများကို ဖော်ထုတ်ခြင်း ဆောင်းပါးတွေ အရမ်းကောင်းပါတယ်ဗျာ .. :)
ကျွန်တော် အကုန် လိုက်ဖတ် ဖြစ်လိုက်တယ်...
တန်ဖိုးရှိတာတွေ မျှဝေပေးတာ ကျေးဇူးပါ ...
အကို့ ဆောင်းပါးတွေကို နာမည် ၊ မူရင်း links နဲ့ တကွ ပြန်လည် မျှဝေချင်လို့ ...
ခွင့်ပြူနိုင်မလား လို့ သိချင်ပါတယ် ဗျာ ...
အဆင်ပြေရင် မိတ်ဆွေ ဖြစ်လိုပါတယ် ...
ကျွန်တော့် gmail နဲ့ blog ကို ထည့်ရေးပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ ...
Sun, 10/21/2012 - 02:10
You can re-share with credits Ko Zin Zay
Dear bro, Ko Zin Zay
Yes, if you want to re-share the articles as you said "ဆောင်းပါးတွေကို နာမည် ၊ မူရင်း links နဲ့ တကွ ပြန်လည် မျှဝေချင်လို့ ...", you can do brother. :)